★မြန်မာ့အလင်း★: မျောက်မဲကြီးမုဒိမ်းကျင့်တာခံထားရတဲ့ရုပ်နဲ့ ကျွန်ကုလား
အထက်က ဓါတ်ပုံကိုကြည့်ပါ။ မြန်မာပြည်မှာ မြွေဆိပ်ဖြေဆေးအတုလုပ်တဲ့ အဖွဲ့ပါ။ သတင်းတွေမှာ မုဒိမ်းကောင် ကြာကူလီတပည့်တွေဟာ ခွေးသေ၀က်သေ သေတာနဲ့ . . . သူတစ်ပါးကိုသတ်တာပဲ ရှိပါတယ်။ ဒီလိုပါပဲ.. အပြင်မှာစီးပွားရှာရင်လည်း ကောင်းရောင်းကောင်းဝယ်လုပ်တာ မရှိပါဘူး။ ကြည့်ပါဦး… မြန်မာပြည်မှာတဲ့… ဒါပေမယ့် . . . ဒုစရိုက်သမား ငါးယောက်မှာ ၄ကောင်ကတော့ မျောက်မဲကြီးက မုဒိမ်းကျင့်လို့ လူဖြစ်လာတဲ့ ရုပ်တွေပါ။ မြန်မာအများစုနေထိုင်တဲ့ နိုင်ငံမှာ မကောင်းတဲ့လူ အများစုကလဲ မြန်မာပဲဖြစ်သင့်တာပေါ့။ အခုတော့ဗျာ…. ကျုပ်တို့ နိုင်ငံမှာ လူနည်းစုဖြစ်တဲ့ ကျွန်ကုလားက ဒုစရိုက်လုပ်ငန်းမှာ အများစုဖြစ်နေတယ်။ သတင်းအပြည့်အစုံတော့ ဒီမှာကြည့်ပါ။
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 5:24 AM